Shan Avocado Company Wins Entrepreneur Award | Myanmar Business Today
HomeBusinessShan Avocado Company Wins Entrepreneur Award
Shan Avocado Company Wins Entrepreneur Award
Shan Avocado Company, which madeasuccess in exporting locally grown avocado to England, won the Entrepreneur Award given by Myanmar Avocado Producers and Exporters Association.
The association held its third annual meeting on December 27 at Zoom and awarded the company with the Entrepreneur Award.
Shan Avocado Company, founded by farmers, started exporting Myanmar avocados to Britain in November this year and received good feedback from the consumers.
Dr. Than Myint, Union Minister of the Ministry of Commerce, at the meeting of MAVO, congratulated the success of exporting three varieties of avocados to Britain and expressed appreciation for the support and collaboration of USAID and UKAid.
Myanmar avocados have demands from Singapore and China as well as European countries such as Germany, the UK, and the Netherlands. In addition to that, there is alsoademand for avocado cream by Japan and South Korea
လန်ဒန်ကို မြန်မာ့ထောပတ်သီးတင်ပို့နိုင်ခဲ့သည့် Shan Avocado Company အား စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်ဆုပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံထောပတ်သီးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်း (MAVO) ၏ တတိယ အကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အသင်းသားစုံညီအစည်းအဝေးကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့က ZoomApplication ဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ယင်းအစည်းအဝေးတွင် ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Shan Avocado Company သည် တောင်သူ များဖြင့် ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းထားပြီး မြန်မာ့ထောပတ် သီးများကို ယခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်း ဗြိတိန် နိုင်ငံသို့ စမ်းသပ်တင်ပို့ခဲ့ရာ လူကြိုက်များခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာနမှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့် ကပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် ဈေးကောင်းရရှိ သကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ထောပတ်သီး (၃) မျိုးကို ဗြိတိန်စျေးကွက်သို့ စမ်းသပ်တင်ပို့ခဲ့ရာတွင် လည်း ရလဒ်ကောင်းများရရှိသည်ကို ကြားသိ ရသည့် အတွက် ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါကြောင်း နှင့်ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးသော USAID, UKaid တို့ကဲ့သို့သော အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပံ့ပိုးမှုများကိုလည်း အသိအမှတ်ပြု ကျေးဇူး တင်ပါကြောင်း (MAVO) ၏ တတိယ အကြိမ် မြောက်နှစ်ပတ်လည်အသင်းသားစုံညီအစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာ့ ထောပတ်သီးများကို စင်္ကာပူနိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံတို့မှ ဝယ်လိုအားရှိသကဲ့သို့ အနောက်နိုင်ငံများဖြစ်သည့် ယူကေ၊ ဂျာမနီနှင့် နယ်သာလန်နိုင်ငံများကလည်း ဝယ်ယူလို မှုများ ရှိနေကြောင်း ထောပတ်သီးအဆီကိုလည်း ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံများက ဝယ်လိုအား ရှိသည်ဟု ဝန်ကြီးက ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ သည်။
Like Viagra, Cialis is also used to treat pulmonary arterial hypertension and was approved as such in the US in May Another similarity is that Eli Lilly struckalicensing deal with the French company Sanofi to maximize any profits it possibly can before the patent expires. cialis malaysia pharmacy In , an announcement of this licensing agreement was made where Sanofi will sell an over-the-counter version of Cialis in the U.
Previous articleYangon Amata Smart and Eco City Project Kicks Off
Next articleMyanmar Extends International Flight Ban Until January 1